အရည်အသွေးကောင်း ATC CNC သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ATC CNC သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် panel ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်စက်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုသူများသည် စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားလာသောကြောင့်၊ ထိုသို့သောထုတ်ကုန်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပရိဘောဂများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သူအရေအတွက်သည် ...
panel saw နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက atc CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း
panel saw နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ATC CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။1. အလုပ်သမားနှင့် အချိန်ကုန်ကျစရိတ် CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် ပစ္စည်းများ အလိုအလျောက် သယ်ဆောင်ပြီး အလုပ်သမားငယ်များကို သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။လူတစ်ဦးသည် ဖြတ်တောက်သည့် စက်များစွာကို လည်ပတ်နိုင်သည်။ဖြတ်စက်က မြန်ဆန်ပြီး ဖြတ်တောက်မှု...
ဒီဇိုင်းအသစ် Fully အလိုအလျောက်သစ်သားဗီရိုတံခါးကို atc cnc router ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဒီဇိုင်းအသစ် အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သစ်သားကက်ဘိနက်တံခါးပြုလုပ်ခြင်း atc cnc router ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စက်ရုပ်ပုံများ- လျှောက်လွှာ: * ပရိဘောဂ: သစ်သားတံခါးများ၊ ဗီဒိုများ၊ ပန်းကန်ပြား၊ ရုံးနှင့်သစ်သားပရိဘောဂများ၊ စားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ။* သစ်သားထုတ်ကုန်များ- အသံသေတ္တာ၊ ဂိမ်းပုံးများ၊ ကွန်ပျူတာစားပွဲများ၊ အပ်ချုပ်မာချီ...
Hot Sale ATC R10 လေးခေါင်းနှင့် 12 ကိရိယာသစ်သားထည်ပရိဘောဂ cnc router လုပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Hot Sale ATC R10 လေးခေါင်းနှင့် 12 ကိရိယာသစ်သားလုပ်ငန်းပရိဘောဂများရောင်းချရန် cnc router စက်ပြုလုပ်ခြင်း ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ- * ပရိဘောဂ: သစ်သားတံခါးများ၊ ဗီဒိုများ၊ ပန်းကန်ပြား၊ ရုံးနှင့်သစ်သားပရိဘောဂများ၊ စားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ။* သစ်သားထုတ်ကုန်များ- အသံသေတ္တာ၊ ဂိမ်းပုံးများ၊ ကွန်ပြူတာစားပွဲများ၊ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယစက်ရုံကို Jinan JCUT CNC Equipment Co., Ltd.
Jinan JCUT CNC Equipment Co., Ltd. ကို 2006 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Jinan အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်တွင် တည်ရှိသည်။ဧရိယာ 26,000 စတုရန်းမီတာကျော် လွှမ်းခြုံထားသည်။၎င်းသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် str...
ဒီဇိုင်းသစ် သစ်သား cnc router ကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက် cabiner door auto tool ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်း cnc စက်ကို တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။
ဒီဇိုင်းအသစ် ATC Wood CNC Router Machine သည် အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော လျှောက်လွှာ- ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများ- ကက်ဘိနက်တံခါးများ၊ သစ်သားတံခါးများ၊ အစိုင်အခဲသစ်သားများ၊ ပန်းကန်ပြားများ၊ ရှေးဟောင်းပရိဘောဂများ၊ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ စားပွဲခုံများနှင့် ကုလားထိုင်များ။အလှဆင်လုပ်ငန်းများ- ဖန်သားပြင်များ၊ လှိုင်းဘုတ်များ၊ အရွယ်အစားကြီးမားသော နံရံချိတ်များ၊ ကြော်ငြာဘုတ်များ...
ကက်ဘိနက်တံခါးမီးဖိုချောင်ပရိဘောဂများပြုလုပ်ခြင်းအတွက်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်သော atc cnc router စက်သည် လျှော့စျေးကြီးပါသည်။
လျှော့စျေး စျေးကြီးသော သစ်သားလုပ်ငန်း atc cnc router စက်အတွက် ဗီရိုတံခါး မီးဖိုချောင်သုံး ပရိဘောဂများ ထုတ်လုပ်ခြင်း ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ * ပရိဘောဂ: သစ်သားတံခါးများ၊ ဗီဒိုများ၊ ပန်းကန်ပြား၊ ရုံးနှင့် သစ်သားပရိဘောဂများ၊ စားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များ၊ တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ။* သစ်သားထုတ်ကုန်များ- အသံသေတ္တာ၊ ဂိမ်းပုံးများ၊ ကွန်ပြူတာစားပွဲများ၊ အပ်ချုပ် mac ...
စက်များသည်ဖောက်သည်၏စက်ရုံသို့ရောက်ရှိပြီးဖောက်သည်၊ သစ်သား cnc စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူထံမှတုံ့ပြန်ချက်
အလုပ်များတဲ့ မတ်လ။အမှာစာများ ပိုများလာသဖြင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုသည် တဖြည်းဖြည်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ် လာပြီး ပူပြင်းသော ရာသီတွင် သစ်သားထည်စက် စျေးကွက် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။စက်ပစ္စည်းများစွာသည် ဖောက်သည်၏စက်ရုံသို့လည်းရောက်ရှိလာပါသည်။ ဖောက်သည်၏တုံ့ပြန်ချက်အား လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၃ နှစ်သားအရွယ် သစ်သား cnc machi...
အသစ်ဒီဇိုင်းအသစ် R8 အော်တိုကိရိယာ cnc စက်များပြုလုပ်ခြင်းသစ်သားတံခါးဗီရိုကိုပြောင်းလဲပါ။
သစ်သားတံခါးများ၊ ဗီရိုများ၊ ဗီရိုများနှင့် ပရိဘောဂအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ R8 Auto Tool Change woodworking machine အကြောင်းရှာဖွေပါ။၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် ဘက်စုံသုံး သစ်သားလုပ်ငန်းသုံး စက်ဖြစ်သည်။ဤစက်သည် အဆင့်မြင့်ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို အသုံးပြုသည်။သူ့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး မီးမောင်းထိုးပြချက်ကတော့ သူ့မှာ tool m...
ဒီဇင်ဘာလတွင် သစ်အချောထည် စက်အမြောက်အမြား တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံတွင် သစ်သား cnc စက်9အစုံ ပြီးသွားသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည်9sets 1325 wood cnc စက်များကို မှာယူခဲ့ပြီး၊ ထိုစက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံတွင် ပြီးသွားအောင် တင်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် 12 နှစ်သက်တမ်းရှိ cnc စက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းသို့ တင်ပို့ရောင်းချပြီး ရောင်းချပြီးနောက် ...
ဖောက်သည်များထံမှ ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်များကို ရယူပါ။
ဖောက်သည်များထံမှ ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်များကို ရယူ၍ အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ အသက်ဖြစ်သည်၊ နည်းပညာအသစ်သည် လုပ်ငန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်၊ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် ကုမ္ပဏီအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီက ပေးချေသည်...
စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများသည် မမြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို နမူနာပြုလုပ်ရန် စက်များကို အသုံးပြုကြသည်။
စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများသည် မမြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို နမူနာပြုလုပ်ရန် စက်ကိုအသုံးပြုနေကြသည် Lamino machining centre cutting machine သည် စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသော ပရိဘောဂများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် အထူးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် သမားရိုးကျ လက်ဖြင့်ဖြတ်ခြင်းမုဒ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး လူလုပ်အားကို အားကိုးနိုင်သည်။တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
စက်ကို ထုပ်ပိုးပြီး တင်ပို့နေပါသည်။
စက်ကို ထုပ်ပိုးပြီး တင်ပို့နေရသော ယနေ့ ရာသီဥတုက အလွန်ကောင်းသည်၊ နေရောင်က တောက်ပသည်၊ လေသည် နေသာသည်၊ ဆောင်းဦးသည် ကြည်လင်နေသည်။ဖောက်သည် အများအပြားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသို့ တယောက်ပြီးတယောက် လာရောက်ကြသည်။စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရာထူးများတွင် အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ်သမားတွေက...
ကုမ္ပဏီသည် Tai'an Rift Valley သို့ စုပေါင်းသွားရောက်ခဲ့သည်။
admin မှ 20-08-12 ရက်နေ့တွင်
ကုမ္ပဏီက မနေ့က Tai'an Rift Valley ကိုစုပေါင်းလည်ပတ်ခဲ့တယ်၊ ရာသီဥတုသာယာတယ်၊ ငါတို့ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး Taian ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။မနက်ခင်းမှာ ဘီယာကို ဘာတွေလုပ်ထားတယ်၊ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် စီမံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကို သိတဲ့ ဘီယာဥယျာဉ်ကို သွားကြည့်တယ်။ဧရာမစက်ကြီး...